स्थानीय आर्थिक र सामाजिक पुनर्संरचनाका भ्रम - Karobar National Economic Daily
स्थानीय आर्थिक र सामाजिक पुनर्संरचनाका भ्रम
query_builderApril 20, 2017 8:58 AM supervisor_accountडा. विनोद न्यौपाने visibility3644
सिद्धान्ततः अहिलेको यो राज्यको संविधानभित्र रहेर तल्लो तहका निकायहरूले आफ्नो हक, अधिकार प्रयोग गर्नु, स्रोत र साधनको परिचालन/व्यवस्थापन गर्नुका साथै मानवीय सुख र समृद्धिका लागि दिगो मूल्य लिँदै भइरहेको वातावरणको समुचित विकास गर्नु, स्थानीय तहमा सेवा र सुविधा पु-याउनु तथा अवसरहरूको खोजी गर्नु हो ।
यो अहिले भनिएको संघीयतामा सामाजिक र आर्थिक आधारभूत आधारहरूबेगर (विषयवस्तु र सूचकांकहरू तयार नगरी) जातजाति, भाषाभाषी, बसाइँसराइ, सामाजिक संरचना, कनेक्टिभिटी, संस्थागत र भौगोलिक सामीप्य रहेको ‘गभर्नान्स’, संस्कृति, संस्कार, रीतिथिति, दैनिक आम्दानी, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको वास्तविक वस्तुस्थिति, छुवाछूतको स्थिति, पुराना राम्रो अवस्थामा रहेका सामाजिक संस्थाहरू र तिनीहरूले खेलेको सामाजिक सम्बन्धका लागि दिगो भूमिका, मौसम, वातावरण आदिको अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलबेगर खडा गरिएको छ ।
प्रदेश–पालिकाहरू (जसमा सबै महानगरदेखि गाउँसम्मलाई पालिका शब्दले समेटेको छ) को भित्री कर्मचारीय व्यवस्थापन, बैठकभत्ता, तलब, विकास कार्य गर्न रकमको जोहोलगायत पूरै संरचना चलायमान कसरी हुन्छ ? अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
स्थानीय स्तरमा सामाजिक आर्थिक पुनर्संरचना हाम्रो मुलुकमा विश्वकै प्रजातान्त्रिक बहावसँगै र सन् १९६० पछि आएको ग्लोबलाइजेसन राजनीतिक अर्थशास्त्रको उद्देश्यअनुरूप समयसापेक्ष परिवर्तित रूप चलिरहेको देखिन्छ । यो भनेको शासक वर्गको लक्ष्य र उद्देश्य ः शक्तिको बहाली र एकीकृत रूपमा पुँजी संकलन गर्नु हो ।
अहिले भैरहेका शासकहरूको साधनस्रोत, सत्ता र शक्तिमाथि पहुँच, नियन्त्रण र महŒवकांक्षा पूर्ति गरिरहने यो संघीयता (आधारभूत आधारभित्र छैन) नामधारी जीव खडा गरिदिए । यसलाई क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नायकहरूले आफ्ना शक्तिको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न सहयोगी बने ।
स्थानीय संस्थागत संरचना सन् १९६२ मा पञ्चायतकालीन अवस्थामा आएर चार तहको राजनीतिक संरचना बन्न पुग्यो । स्थानीय स्तरको तहलाई गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत भनिन्थ्यो । स्थानीय निकायको सञ्चालन गर्न पञ्चायत कालकै सुरुतिर मुखिया र जिम्मुवाल गाउँलेबाट रकम उठाएर पाँच–सात कक्षा पढेको वा सामान्य निवेदन, भर्पाइ, तमसुक लेख्न जान्नेलाई वार्षिक केही रकम दिएर राख्थे ।
केही पछि यो गाविस सचिवको हैसियतमा आइपुग्यो । केन्द्रबाट जिल्ला पञ्चायतमार्फत आएको बजेट प्रधानपञ्चमार्फत विकास कार्यलाई खर्च गरिन्थ्यो । तर, पहिलेदेखि नै स्थानीय निकायलाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबल बनाउने कार्य कसैले गरेको पाइँदैन ।
अहिले पनि यसभित्रको आर्थिक–व्यवस्थापकीय पद्धतिलाई स्थानीय सामाजिक संरचना, मानवीय र आर्थिक भूगोलको अध्ययनबिना हचुवा गरियो । स्थानीय स्तरीय अलिखित सामाजिक संस्थाहरू लिखततिर मोडिएको देखिन्छ । अहिलेको यो संघीयताकै नाममा विकेन्द्रीकरणकै रूपमा स्थानीय निकायहरूलाई स्थापित गरिएको छ ।
पूर्वयोजना बनाउनु पर्दैन ?
सामान्य अर्थमै हाम्रो घरमा आमाले दसैँ आउने बेला दसैँका लागि योजना बनाउनुहुन्थ्यो । दसैँको १५ दिने समय सीमाभित्रका लागि योजना यसरी बन्थ्यो कि मित्र भेटघाट, दुःखसुख साटासाटको उद्देश्य लुकेको हुन्थ्यो भने पूरै आर्थिक खर्च विवरण रहन्थ्यो ।
मेरी आमा न अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, न योजनाविद् नै; तर घरपरिवारको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, रीतिरिवाजबारे विस्तृत ज्ञान राख्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै यो मुलुक (घर) मा संघीयता लागू गर्न, सीमांकन गर्न र स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्दा कुनै पनि विस्तृत अध्ययन, छलफल भएन ।
सन् १९९० देखि शासन गर्दै आएका पार्टीहरू, यसमा नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्ग र छमेकी मुलुकको स्वार्थअनुकूल भटाभट सीमांकनदेखि पुनर्संरचना गर्दै लगियो । राजनीतिक–आर्थिक पाटोमा यस नवउदारवादभित्रको अवस्थामा देश हलो अड्किएको गोरुसमान छट्पटिएको हामी देखिभोगिरहेका छौं ।
यसरी हामी यी क्रियाकलापमा जाँदा हाम्रा पुर्खाहरू र हामी बसेको भूमिको ऐतिहासिक दस्तावेज, सिर्जनात्मक विकासको बहाव, स्थानभित्र हुने सामाजिक र आर्थिक गतिविधि, संरचना, हाम्रो सामाजिक सद्भाव, भइरहेका गभर्नान्सका पक्ष आदि–इत्यादि केलाउने प्रयास गरेनौं ।
नेपालकै योजनाविद् अर्थशास्त्री वा व्यवस्थापनविद्हरू स्वार्थका कारण पार्टीका व्यक्तिहरूले भनेको कुरालाई होहो भनेर लागेको देखिन्छ ।
नेपालमा संघीय संरचनाबारे पर्याप्त अनुसन्धान, ‘बटम टु टप’ विश्लेषण, सूचकांकहरूको प्रयोग, आवश्यकता, सामीप्य, कनेक्टिभिटी, स्रोत र साधनबारे कसरी भनेर डेमोग्राफिक (उमेर, लिंग, विवाहको स्थिति, नस्ल, जातजाति, आम्दानी र पेसा आदि) मूल्य (मानिसको आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप, भौतिक र सामाजिक अवस्था) को अध्ययन भएन ।
भूगोल, जातजाति, सामाजिक विखण्डन, सामाजिक संरचना, विपद् व्यवस्थापन, मूल्य–मान्यता र जातीय कोहेसिब बोन्ड, जमिनको अति असमान स्वामित्व र भूमिमा आधारित शोषण, हिजोको द्वन्द्वका संरचनागत कारणहरू, हिजोको स्थिति–आजको स्थिति र १ सय वर्षपछि हुने स्थिति इत्यादि अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ, त्यो पनि केही गरिएन ।
पार्टीको नेतृत्वमा रहनेहरूसँग योजना, नेतृत्वदायी क्षमता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, दृष्टिकोण र कार्यशैली केही पनि देखिएन । अहिले हामी हिँडिरहेको मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्र नवउदारवादी प्रवृत्ति, यसले ल्याएका विकृति, कमिसन र भ्रष्टाचारका रूपहरूको अध्ययन आधारहरू खोजिनुपथ्र्यो ।
हाम्रो देशमा चलिरहेको राजनीतिक–अर्थशास्त्रभित्रका विकृति रोक्ने, रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहँुदै आधारभूत नेपाली धरातल खोजिएको छैन । राजनीतिक–आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण मात्र संघीयता होइन । विकेन्द्रीकरणको दुरुपयोग हिजोको हाम्रो अभ्यासले सजिलै देखाएको छ ।
यो राज्यसञ्चालन पद्धति हो, जहाँ धेरैभन्दा धेरै अधिकार तल्ला तहहरूमा पु¥याएर सशक्तीकरण गरिन्छ । त्यस्तै सद्भाव, भाषाभाषी, जातजातिलाई सूत्रबद्ध रूपमा जोड्ने, सबैको सम्मान, मानवीय मूल्य–मान्यतामा रहेर बस्ने समुदाय तयार गर्ने, पिछडिएका, गरिबीले थिचिएका वर्गलाई उकास्ने, सेवा, सुविधा र अवसरहरूको घरछेउमै व्यवस्थित गर्ने आदि काम गरिन्छ ।
हाम्रो देशमा पार्टी र पार्टीका नेतृत्वतहले आफ्नो एकाधिकार, पुरानै सामन्ती सोचको साथ एकात्मक संघीयता आफू र आफ्ना अन्तर्गतका बुद्धिजीवी र बिज्ञ राखी बनाए । त्यसैले प्रत्येक बिन्दुमा द्वन्द्वहरू जन्माउँदै गए । झन्–झन् जटिल बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्य गरे, जसको नतिजा भोगिरहेकै छौं ।
राष्ट्रिय सरोकारका अति महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने सवाललाई उचित, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट टुंग्याउनुको सट्टा चार–पाँच जना नेताको स्वार्थ र लहडमा देशको संविधान र ऐन–कानुनभन्दा माथि रहेर गरिएको संघीयता, सीमांकन र पुनर्संरचनाजस्ता कार्यहरू भइरहेको छ । यसले देशलाई थप जटिलतातिर लग्यो र तत्कालै सुधार हुने स्थिति पनि देखिँदैन ।
अहिले नै सबै प्राथमिक आधारहरू केलाएको भए संस्थागत विकास गर्न हामी पाँच वर्षभित्र सक्ने थियौं । अब यसका लागि बीसौं वर्ष लाग्ने भयो, जसमा खर्चदेखि अन्य मानवीय द्वन्द्वहरू स्वार्थप्रेरित भएर जन्मिने जोखिम छ । संविधान संघीयतामा गइसकेको अवस्था छ । धरातलीय स्वरूप र तŒवहरू नसमाइएकाले अब यो कार्यान्वयन गराउन सिंगै पहाड खडा छ ।
प्रदेशहरू निर्माण गरिएको छ, यसैमा सीमांकनको विषय लिएर पार्टीहरूबीच र लबिङ सेक्टर (लोकल, सुप्रा लोकल, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय) बीच झगडा भइरहेको छ । मूलतः त्यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीयवासीको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भावना, संरचना, क्षमता, अवसर आदिको समयसापेक्ष अध्ययन र त्यही आधार नलिएकाले यी समस्या आएका हुन् । यी समस्याको जरो पहिल्याउन र समाधान गर्न इमानदारी, जिम्मेदारी, दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता अपरिहार्य छ ।
हक–अधिकार त तोकिदिएका छन्, तर पालिका र प्रदेशहरूको आर्थिक व्यवस्थापन, पूरै संयन्त्रभित्रको अर्थव्यवस्था र आर्थिक प्रणालीबारे न कुनै योजना छ, न कुनै ठोस नीति नै देखिएको छ । अहिलेसम्म हेर्दा दाताहरूकै सहयोगमा स्थानीय निकायहरू चलेका देखिन्छन् । स्थानीय निकायहरू भोलिका दिन हात झिकिदिनासाथ अलपत्र हुने सम्भावना देखिन्छ । सन् १९५० अघिदेखि दातृ सहयोग र ऋणका भरमा छ । हाम्रो विकास प्रणाली त्यही मुताबिक सञ्चालन गर्दै आएका छौ ।
स्थानीय निकाय, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागि अर्बौं रुपैयाँबराबरीको खर्च हामी गर्दै छौं । हामी निर्लज्ज भारत र चीनसँग छेकाबार, मसीदेखि गाडीसम्म मागेर यो एकात्मक संघीयता टिकाउँदै छांै । भोलिका दिन यो तीन तहको राजनीतिक व्यवस्था कसरी टिक्छ, यो जटिल बनेर तेर्सिएको छ । निर्वाचनपछि संघीय संरचनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अर्बौं रुपैयाँको स्रोत आवश्यक पर्छ । त्यो कहाँबाट जुटाउने हो ?
दाताका भरको हाम्रो संघीयताको खुट्टो टेकाइ के होला, आफैं कल्पना गरौं । यो सञ्चालनार्थ (स्थानीय तह–पालिका–प्रदेश) कार्यान्वयनका लागि को–कोसँग, कसरी, कति–कति सहयोग माग्ने, त्यो कसैले सोचेको देखिँदैन ।
(लेखक संघीयता मामिलासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।)
संविधान स्थानीय आर्थिक सामाजिक पुनर्संरचना